बाहुनीलाई नि मन्त्र पढ्न आउँछ ? |
बाहुनीलाई नि मन्त्र पढ्न आउँछ ?
प्रकाशित मिति :2017-07-16 12:35:09
काठमाडौं । ६२ वर्षकी कमलादेवी पोखरेल पशुपती मन्दिरको गेट अगाडी नियमित आउने गरेकी छन् । यो क्रम १२ वर्षदेखि जारि छ । उनको अगाडी रातो टिका, केशरी, अछेता राखिएको हुन्छ । दर्शनार्थीलाई आर्शिवाद दिदै टिका लगाईदिने उनको दैनिकी हो ।
काठमाडौंको महाराजगन्जमा बस्दै आएकी कमलादेवि श्रीमानसंगै हरेक विहान ६ बजे पशुपती पुग्छिन् । १२ वर्ष अघि श्रीमानले एउटा मृगौला छोरालाई दिएपछि उनी कम्जोर भएकाले कमलादेवि श्रीमानलाई सघाउन पशुपति आउन थालेकी हुन् ।
सुरुका दिनमा यो काम उनलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो । अहिले सहज लाग्छ । उनी भन्छिन्–‘महिलाले खासै नगर्ने काम भएकाले सुरुका दिनमा अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अहिले बानी हुदै गयो ।’
उनलाई बाहुनले जस्तै मन्त्र पढ्न र पुजापाठको सवै कर्म आउँछ । तर केही दर्शनार्थीले महिलाले पनि पण्डितजस्तै मन्त्र पढ्न काहाँ आउँछ र ? भनेर हेप्ने गरेको उनले अनुभव बताइन् । कतिले टिका लगाउनु अघि तपाई बाहुन नै होनि भनेर सोध्ने गर्छन् । तर पुरुषलाई शंकाको त्यो घेराले कहिल्यै नहेर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
‘बाहुन हो भनेर सोध्छन्, म हो भन्छु, अनि मात्र टिका लगाउँछन् । तर यहाँ धेरै पुरुष पण्डितहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई कहिले पनि बाहुन हो की नाई भनेर सोधेको मैले सुनेकी छैन’ कमलादेवीले भनिन् ।
काठमाडौं कपनकी ६० वर्षिया ढकामाया बाग्ले पनि १ बर्षदेखि पशुपतिकाे गेट अगाडी बसेर पण्डित्याईँ काम गदै अाउनुभएकाे छ । ओखलढुंगाको घर भुकम्पले भत्काएपछि २ बर्षअघि ४ सन्तान सहित काठमाडौं आएकी ढकामाया श्रीमानसंगै पशुपतिमा पण्डित्याईँको काम गर्छिन् ।
तर संगै बसेको श्रीमानले कहिल्यै उत्तर दिनुनपर्ने प्रश्न, ‘तपाई बाहुन नै हुन् नि’ भन्ने प्रश्नको उत्तर ढकामायाले सधै दिनुपर्छ ।
‘टिका लगाउनु पहिला तपाई बाहुन हो भनेर सोध्छन् । म हो भन्ने संकेतमा टाउको हल्लाउछु । तर मेरो बुढोले त्यो उत्तर कहिल्यै दिनुपर्दैन ।’ ‘आमाको हातबाट टिका लगाउन पाइयो भनेर खुशी हुनेहरु पनि धेरै छन्’, उनले थपिन् ।